INEC na APC Nwere Rue Tọzdee Maka Ịzaghachi Mkpesa Atiku
Kelechukwu Ibe, Ogun, Nigeria
Ụlọ ọrụ na-achịkọba ntụliaka n'ala anyị bụ Naijiria, Independet National Electoral Commission, na otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress ka nwere ohere rue Tọzdee maka inye ụsa banyere mkpesa ahụ nke ndị People's Democratic Party na onye zọrọ ọkwa onyeisiala na ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị, Alhaji Atiku Abubakar, nke ha ji were na-ama mpụtara nke ntụliaka onyeisiala emere na abalị iri abụọ na atọ nke ọnwa Febrụwarị aka.
N'ihi na akwụkwọ mkpesa ahụ erughị ya aka n'oge, Onyeisiala Muhammadu Buhari, bụ onye jiri aha ndọrọndọrọ ọchịchị APC were zọọ ọkwa onyeisiala, nwere rue abalị iri na isii nke ọnwa Epurel iji were nye ụsa nke ya banyere mkpesa ahụ.
Atiku na otu ndọrọndọrọ ọchịchị ya, n'ụbọchị iri na asatọ nke ọnwa Maachị, afọ puku abụọ na iri na iteghete tinyere akwụkwọ mkpesa n'ihu otu ahụ na-ahụ maka mkpesa nke ntụliaka onyeisiala, were na-ekwu na ọ bụghị Buhari na APC turu ugo na ya bụ ntụliaka.
Ha gara n'ihu were kwuo na ọ bụ onye zọrọ ọkwa onyeisiala n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP bụ onye meriri nke megidere ihe INEC kwuru. INEC, Buhari na APC bụ ndị mbụ were ruo na nke atọ bụ ndị mkpesa ahụ metụtara.
Ndị mkpesa ahụ nyere ụlọ ọrụ INEC na APC akwụkwọ mkpesa na abalị iri abụọ na abụọ nke ọnwa Maachị, mana ihe agaghị ka siri chee dịka ha nwere ihe ndọghachi azụ were ruo abalị iri abụọ na asaa nke ọnwa Maachị oge ha nwetara ikike na ụlọikpe mkpesa dị na Abụja nke nyere ha ike ịnye onyeisiala akwụkwọ mkpesa ha site n'ụzọ ọzọ. Ha kwuru na ọ bụ n'ihi usoro dị iche iche na ọrụ ndị nche nke nọ na ụlọ onyeisiala so n'ụfọdụ ihe mere ha ejighị nwee ike nye Buhari akwụkwọ mkpesa ahụ n'aka.
Dịka ọ dị ugbu a, ohere ụlọ ọrụ INEC na APC nwere ga-agwụ na mkpụrụ ụbọchị iri na otu nke ọnwa Epurel, nke ga-eme ya abalị iri abụọ na otu ha nwetara akwụkwọ mkpesa ahụ. Nke a bụzi ihe otu onye n'ime ndị ọkàiwu otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC kwetara ma kwuzie na ha ga-azaghachi ya bụ akwụkwọ mkpesa tupu Tọzdee bụ ụbọchị ikpeazụ.